एमालेको महाधिवेशन स्थलमा नै कहाँबाट आयो जिवित गैंडा ? – Patrika Nepal
मंग्सिर १३, २०७८ सोमबार 62
चितवन-नेकपा (एमाले)को १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्र सौराहामा जारी छ । आगामी नेतृत्व सर्वसम्मतबाट आउने कि चुनावबाट भन्नेमा अझै अन्यौलपूर्ण छ । आज आइतबार निर्वाचन हुने भनिएकोमा अझै पनि त्यसको टुंगो लागेको छैन ।
महाधिवेशनको बन्द सत्र होटल सेभेन स्टारमा हुँदै छ । आइतबार साँझ महाधिवेशनस्थलमा निस्किएको गैंडाको नाम मेघौली हो । यो गैंडा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले २०७४ सालमा मेघौलीबाट उद्धार गरेको हो ।बाढीमा फसेको गैंडालाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहामा राखियो ।
गैंडाको न्वारन गरेर मेघौली नाम राखिएको हो । मेघौलीलाई तीन वर्षअघि नै प्रकृतिमा छाडिएको हो । मानिससँग घुलमिल भइरहेको मेघौली प्राय सौराहाका सडकमा आइराख्ने गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष सौराहाका प्रमुख बाबुराम लामिछाने बताउँछन् ।
Prevकठै !पुण्य गौतम रुदै रुदै मिडियामा आए,टिकटक छोड्ने भन्दै यसरी सबै दुख पोखे (भिडियो सहित )
Nextकाे’राेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ‘मिक्रोन’ भेटिएपछि मंगलवारदेखि मास्क अनिवार्य लगाउनु पर्ने
पुरुषले गर्ने यस्तो काम गरेको भन्दै यी सुन्दरी युवतीले देशै छोड्नु पर्यो ? जुन थाहा पाउदा तपाई पनि अचम्ममा पर्नु हुनेछ !